မထင်​မှတ်​ပဲ ဒုတိယနှစ် အင်္ဂလိပ်စာ မေးခွန်းမှာ letter အနေနဲ့ ပါလာတဲ့ စိုင်းစိုင်းshow အ​ကြောင်း – MyanmarEating
မထင်​မှတ်​ပဲ ဒုတိယနှစ် အင်္ဂလိပ်စာ မေးခွန်းမှာ letter အနေနဲ့ ပါလာတဲ့ စိုင်းစိုင်းshow အ​ကြောင်း
“ပြီးခဲ့သော ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း ” ဆိုတဲ့ စိုင်းစိုင်းရဲ့ Showပွဲလေးကို အောက်တိုဘာလ(၁၄)ရက်နေ့၊တနင်္ဂနွေနေ့ ည (7)ခွဲအချိန်၊ အမျိုးသားပြဇာတ်ရုံမှာ ကျင်းပခဲ့ပြီး လက်မှတ်အရေအတွက်၊ ပရိသတ်လူဦးရေ (၁၅၀၀) ခန့်သာ သတ်မှတ်ထားခဲ့တာမို့ လက်မှတ်မရတဲ့ ပရိသတ်တွေကတော့ ကြည်ရှူ့ခွင့်မရခဲ့ပါဘူး။ လက်မှတ်စရောင်းတဲ့ (၁)ရက်အတွင်း မှာ အကုန်Sold outဖြစ်ခဲ့ရသလို တချို့ပရိသတ်များက မနက် ၆ နာရီထပြီး ခက်ခက်ခဲခဲတန်းစီ လက်မှတ်ဝယ်ယူခဲ့ကြ အားပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
ဆရာ ဓီရာမိုရ် ဂီတကဗျာအဖွဲ့နဲ့ အတူ “ပြီးခဲ့သော ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း ” ဆိုတဲ့ စိုင်းစိုင် ရဲ့ ပွဲလေးမှာ စိုင်းစိုင်းရဲ့သူငယ်ချင်းတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ မမို့မို့ ၊ ဂျွန် ၊ ကြိုးကြာ ၊ မသီရိဂျေ ၊ သီရိဆွေ ၊ ငယ်ငယ် ၊ ကောင်းမြတ် ၊ ဖြိုးကြီး ၊ နန္ဒစိုင်း ၊ မိုးမိုး ၊ ကိုသအို ၊ ဘန်နီ ၊ ဖြိုးလေး ၊ နေဝင်း ၊ G Fatt ၊ ကိုမျိုးကျော့မြိုင် ၊ မောင်မောင်ပြည့်စုံ တို့ နဲ့ အတူ နှင့် တို့ပါ ပါဝင်အားဖြည့် သီဆိုထားပေးကြပါတယ်။ လက်မှတ် ကြိုရပြီး အထူးလာကြည့်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ ပရိသတ်တွေ အတွက်ကိုတော့ စိုင်းစိုင်းက အထူးမေတ္တာလက်ဆောင် အနေနဲ့ စိုင်းစိုင်းပုံနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ ဖက်ခေါင်းအုံးလေးတွေ တစ်ယောက်ချင်းစီ အတွက် ခုံလေးတွေ မှာ လက်ဆောင်ပြန်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။
ဒီပွဲလေးဟာ အရမ်းကို ကြည့်ရကျိုးနပ်ခဲ့သလို သွားကြည့်တဲ့ ပရိသတ်တွေပါ တကယ့်ကို အမှတ်တရကောင်းလေးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့တဲ့ ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်ပြီး ထူးထူးခြားခြား အနေနဲ့ အဝေးသင် Philosophy မေဂျာ ဘာသာရပ်ရဲ့ ဒုတိယနှစ် အင်္ဂလိပ်စာ မေးခွန်းမှာ စိုင်းစိုင်းရဲ့ SHOW ပွဲလေးအကြောင်းကို မေးခွန်းတစ်ခုအနေနဲ့ မထင်မှတ်ပဲ ပါလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ” You are going to watch Sai sai’s Show at Sedona Hotel. Writeanote to your friend asking him/her to accompany you to go to show and then writeareply to it.” ဆိုတဲ့ စိုင်းစိုင်း ရှိုးကို သွားဖို့ သူငယ်ချင်းကို ဖိတ်ခေါ်ခိုင်းတဲ့ စာတစ်စောင်အကြောင်း ကို Philosophy မေဂျာ ဘာသာရပ်ရဲ့ ဒုတိယနှစ် အင်္ဂလိပ်စာ မေးခွန်းမှာ letter အနေနဲ့ ရေးသား ဖြေဆိုဖို့ ပါဝင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး မထင်မှတ်ပဲ မေးခွန်အဖြစ် ပါဝင်လာခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ show ကြောင့် စိုင်းစိုင်းက “ဖြေနိုင်ကြရဲ့လား” လို့ စိုင်းစိုင်း ပရိသတ်လေးတွေကို ပြန်လည် မေးခွန်းထုတ်ကာ ဖြေသိမ့်ထားပါတယ်နော်…။
source: Sai sai Kham Leng & facebook photo
“ပွီးခဲ့သော ဇာတျလမျးအကဉျြး ” ဆိုတဲ့ စိုငျးစိုငျးရဲ့ Showပှဲလေးကို အောကျတိုဘာလ(၁၄)ရကျနေ့၊တနင်ျဂနှနေေ့ ည (7)ခှဲအခြိနျ၊ အမြိုးသားပွဇာတျရုံမှာ ကငျြးပခဲ့ပွီး လကျမှတျအရအေတှကျ၊ ပရိသတျလူဦးရေ (၁၅၀၀) ခနျ့သာ သတျမှတျထားခဲ့တာမို့ လကျမှတျမရတဲ့ ပရိသတျတှကေတော့ ကွညျရှူ့ခှငျ့မရခဲ့ပါဘူး။ လကျမှတျစရောငျးတဲ့ (၁)ရကျအတှငျး မှာ အကုနျSold outဖွဈခဲ့ရသလို တခြို့ပရိသတျမြားက မနကျ ၆ နာရီထပွီး ခကျခကျခဲခဲတနျးစီ လကျမှတျဝယျယူခဲ့ကွ အားပေးခဲ့ကွတာဖွဈပါတယျ။
ဆရာ ဓီရာမိုရျ ဂီတကဗြာအဖှဲ့နဲ့ အတူ “ပွီးခဲ့သော ဇာတျလမျးအကဉျြး ” ဆိုတဲ့ စိုငျးစိုငျ ရဲ့ ပှဲလေးမှာ စိုငျးစိုငျးရဲ့သူငယျခငျြးတှေ ဖွဈကွတဲ့ မမို့မို့ ၊ ဂြှနျ ၊ ကွိုးကွာ ၊ မသီရိဂြေ ၊ သီရိဆှေ ၊ ငယျငယျ ၊ ကောငျးမွတျ ၊ ဖွိုးကွီး ၊ နန်ဒစိုငျး ၊ မိုးမိုး ၊ ကိုသအို ၊ ဘနျနီ ၊ ဖွိုးလေး ၊ နဝေငျး ၊ G Fatt ၊ ကိုမြိုးကြော့မွိုငျ ၊ မောငျမောငျပွညျ့စုံ တို့ နဲ့ အတူ နှငျ့ တို့ပါ ပါဝငျအားဖွညျ့ သီဆိုထားပေးကွပါတယျ။ လကျမှတျ ကွိုရပွီး အထူးလာကွညျ့ခှငျ့ရခဲ့တဲ့ ပရိသတျတှေ အတှကျကိုတော့ စိုငျးစိုငျးက အထူးမတ်ေတာလကျဆောငျ အနနေဲ့ စိုငျးစိုငျးပုံနဲ့ ပွုလုပျထားတဲ့ ဖကျခေါငျးအုံးလေးတှေ တဈယောကျခငျြးစီ အတှကျ ခုံလေးတှေ မှာ လကျဆောငျပွနျပေးခဲ့ပါသေးတယျ။
ဒီပှဲလေးဟာ အရမျးကို ကွညျ့ရကြိုးနပျခဲ့သလို သှားကွညျ့တဲ့ ပရိသတျတှပေါ တကယျ့ကို အမှတျတရကောငျးလေးကို ပိုငျဆိုငျနိုငျခဲ့တဲ့ ပှဲတဈပှဲဖွဈပွီး ထူးထူးခွားခွား အနနေဲ့ အဝေးသငျ Philosophy မဂြော ဘာသာရပျရဲ့ ဒုတိယနှဈ အင်ျဂလိပျစာ မေးခှနျးမှာ စိုငျးစိုငျးရဲ့ SHOW ပှဲလေးအကွောငျးကို မေးခှနျးတဈခုအနနေဲ့ မထငျမှတျပဲ ပါလာခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ” You are going to watch Sai sai’s Show at Sedona Hotel. Writeanote to your friend asking him/her to accompany you to go to show and then writeareply to it.” ဆိုတဲ့ စိုငျးစိုငျး ရှိုးကို သှားဖို့ သူငယျခငျြးကို ဖိတျချေါခိုငျးတဲ့ စာတဈစောငျအကွောငျး ကို Philosophy မဂြော ဘာသာရပျရဲ့ ဒုတိယနှဈ အင်ျဂလိပျစာ မေးခှနျးမှာ letter အနနေဲ့ ရေးသား ဖွဆေိုဖို့ ပါဝငျခဲ့တာ ဖွဈပွီး မထငျမှတျပဲ မေးခှနျအဖွဈ ပါဝငျလာခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ show ကွောငျ့ စိုငျးစိုငျးက “ဖွနေိုငျကွရဲ့လား” လို့ စိုငျးစိုငျး ပရိသတျလေးတှကေို ပွနျလညျ မေးခှနျးထုတျကာ ဖွသေိမျ့ထားပါတယျနျော…။
Originally posted 2018-10-26 12:45:48.